(Barcelona) 05 Okt 2020. Barcelona ayaa shacisay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray xiddigeeda Jordi Alba, kaasoo soo gaaray inta lagu gudi jiray kulankii xalay ee Seville.
Jordi Alba ayaa soo gaaray dhaawac muruqa ah kaddib markii uu isku dayay inuu xakameeyo kubadda inta ay ciyaarta socotay, isagoo ugu dambeyntii ka baxay garoonka, waxaana lagu badelay xiddiga dhawaangalka ah ee Sergino Dest.
Haddaba kooxda Barcelona ayaa warbixin rasmi ah ay ka soo saartay dhaawaca Jordi Alba, waxay ku sheegtay:
“Jordi Alba wuxuu la dhibtoonayaa dhaawac muruqa bowdada midig ah, baaritaanno dheeri ah ayaa la sameyn doonaa Isniinta, si loo ogaado heerka uu gaarsiisan yahay dhaawicaan”.
Nasiib wanaag kooxda Barcelona ayaa la kulmeysa dhaawaca Jordi Alba maalmaha fasaxa ee kulamada caalamiga ah, waxaana laga yaabaa in ciyaaryahanka uusan qeyb ka noqonin xulka Spain kulamada UEFA Nations League.
Kooxaha Barcelona iyo Sevilla oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Camp Nou… +SAWIRRO